Misaraka distro miorina amin'ny Debian mifantoka amin'ny fiainana manokana | Avy amin'ny Linux
Septor distro miorina amin'ny Debian mifantoka amin'ny fiainana manokana
Rehefa miresaka momba ny rafitra mifantoka amin'ny fiainana manokana isika Raha ny marina vitsy ny ao amin'ny Linux Ary amin'ny eritreritra faharoa, ny ankamaroan'izy ireo dia mandray an'i Debian ho fototra, sendra izany ve? Na dia amin'ny fomba fijery azo ampiharina aza i Debian dia nametraka ny tenany ho iray amin'ireo fizarana matanjaka indrindra miaraka amina fampiharana marobe.
Na dia amin'ny fomba fijery manokana momba izany aza dia aleoko ny Fedora na ny Arch Linux, saingy zavatra hafa izany. Amin'ity indray mitoraka ity isika dia hiresaka momba ny fizarana Linux izay mifantoka amin'ny fiainana manokana.
1 Momba an'i Septor Linux
2 Sintomy ny Septor Linux
Momba an'i Septor Linux
Septor dia fizarana Linux izay manome ny mpampiasa tontolo iainana informatika efa voarindra mba hijerena an-tsokosoko Internet.
Ny fizarana Septor mampiasa KDE Plasma ho toy ny tontolon'ny birao ankafiziny ary koa misy mpanavotra hampidina ny tranokala Tor farany ary koa ny OnionShare ho an'ny fizarana rakitra tsy fantatra anarana ary Ricochet ho an'ny hafatra tsy mitonona anarana.
Amin'ity tranga ity Debian (Buster) no ampiasaina ho fototry ny rafitra fiasa ao amin'ny kinikany mbola eo an-dàlam-pamolavolana, miaraka amina tontolo iainana KDE.
Ny fizarana dia azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny maody mivantana, miaraka amin'ny fanampian'ny tsato-kazo USB na azo apetraka kilasika amin'ny kapila mafy.
Fonosana Linux Sepatra ambony
Currently the Ny rafitra dia mazàna amin'ny fonosana mandrafitra an'i Debian Buster ary eo afovoan'ny rafitra no ahitantsika ny Linux Kernel 4.19 ary koa ny tontolon'ny birao KDE Plasma ao amin'ny kinova 5.14.3.
Araka ny asan'ny tetikasa, ho an'ny rindrambaiko efa napetraka dia voafantina ireo rindranasa izay heverina ho mety amin'ny fizarana an'ity karazana ity. Rindrambaiko roa no nahazo soloina, ka izao ny lisitr'ireo programa dia toa izao:
Dolphin sy KFind hitantanana sy hikarohana rakitra.
Synaptic sy Gdebi hitantanana sy hametraka ilay rindrambaiko.
Sary / Multimédia: GIMP, Gwenview. VLC, K3b, Guvcview
Birao: LibreOffice, Kontact, KOrganizer, Okular, Kwrite, Kate
Fitaovana: Gufw, Konsole, Ark, Sweeper, KGpg, Cleopatra, MAT, KWallet, VeraCrypt, Bootis
Ho an'ny fidirana amin'ireo rakitra ao anaty fisie root, misy kisary misy ao amin'ny menio. Amin'ny fanombohana voalohany dia hanontany ny mpanjifa fandefasana hafatra eo no eo Ricochet raha te hifandray amin'ny alàlan'ny tambajotra Tor ny mpampiasa.
HexChat sy QuiteRSS dia voalamina amin'ny alàlan'ny default amin'ny tambajotra Tor, ary afaka manova izany ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fikirakirana ireo rindranasa ireo ao amin'ny Tambajotra.
Farany, raha mbola tsy manana ianao Septor Linux apetraka amin'ny solo-sainanao ary te-hisintona sy hametraka an'ity fizarana Linux ity ianao mifantoka amin'ny fiainanao manokana amin'ny solo-sainanao na te hizaha azy eo ambanin'ny masinina virtoaly ianao.
Septor Linux dia zaraina ho sary Live DVD ISO tokana Izy io dia mirakitra fonosana haingam-pandeha ho an'ny mari-trano fikirakirana 64-bit (x86_64) ary mety hodorana amin'ny kapila USB 2GB na lehibe kokoa ary koa DVD.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Septor distro miorina amin'ny Debian mifantoka amin'ny fiainana manokana
Purism dia manambara ny fanavaozana CPU sy GPU ho an'ny kahie
Virtualization: Teknolojia misy amin'ny 2019